Isilawuli sethempelesha Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ithempelesha Isilawuli Isilawuli
Isilawuli samazinga okushisa okubandayo EK-3030 sisetshenziswa emafrijini ezentengiselwano
Okufakwayo kwe-4.Two sensor: inzwa yokushisa yekhabethe kanye ne-defrost temperature sensor.Three way control control output: Refrigeration, defrost and fan.
Ngokwezifiso ubuchwepheshe obusha bokushisa nomswakama isilawuli i-JSD-100 +
Ukukala kokushisa nokulawula;
Ukuvikela ukubambezeleka kokuqalisa;
Iphasiwedi yokufaka ukulungisa ipharamitha.
Izingxenye zefriji ezihlakaniphile i-thermostat ETC-200 +
I-alamu lapho idlula isikhathi.
Shintsha phakathi kwesiqandisi nokushisa;
Ubuchwepheshe obusha bokugcina amanzi obubandayo obunqamula i-thermostat ETC-961
Umsebenzi wokuqandisa nokuncipha;
Buyisela umehluko wokulawula, ukulungiswa kwesibonisi sokushisa esingu-0.1 ℃;
Umsebenzi we-alamu amaningi.
Isitayela esisha sefriji kanye ne-defrost ukuguqulwa kwe-thermostat ETC-974
Ukuqandisa, ukuhlehlisa, izindlela eziningi zokulawula fan ezilawula inketho;
Ifriji ebiza izindleko eziphansi kanye ne-therrost thermostat ETC-3000
Inkampani yethu ngokukhethekile R & D, ukukhiqizwa kanye yokuthengisa microcomputer lokushisa abalawuli nomswakama Izilawuli. I-chip esetshenziswa kwisilawuli sethempelesha inokusebenza okuzinzile, imisebenzi ephelele, ukuvikelwa okuningi, ukwakheka okuthuthukile nokunengqondo kwesakhiwo nokucubungula inqubo, futhi izinga lobuchwepheshe liphambili emhlabeni jikelele futhi lihola ngaphakathi. Lo mkhiqizo unezinhlobonhlobo zezicelo emkhakheni nasembonini yokuqandisa nokuqandisa kanye nefriji ...
Izingxenye zokuqandisa ezibandayo kanye nomswakama we-JSD-100 +
Lo mkhiqizo usebenzise isilawuli somswakama, ukuthembeka okuphezulu nokuqina okuhle kwesikhathi eside, njll.
Ingasetshenziswa kabanzi emshinini we-humidifying, i-dehumidifier, umswakama womoya;
Lungisa ukulawula umswakama kwemishini nezinye izinto zokusebenza;
Futhi ingasetshenziswa ekulinganisweni komswakama ohlobene nokubonisa.
Ikhwalithi ephezulu yesibonisi se-digital thermostat STC-100A yokukhiqiza
Shintsha imodi phakathi kokushisa nokufaka esiqandisini
Ukulawula izinga lokushisa ngokulungisa kokubili inani lokusetha lokushisa nenani lomehluko
Ukubambezeleka kokuvikelwa lapho kuqala ukufriji nokushisa
Khawulela ibanga lokusetha lokushisa
Linganisa izinga lokushisa
I-alamu lapho iphutha lenzwa
Ukuthengisa okushisayo ubuchwepheshe obusha be-elekthronikhi isilawuli se-STC-200
Hlakulela ukushintshwa okwenziwa ngesandla phakathi kwesiqandisi, ukushisa ne-alamu, umehluko ukulawula ukushisa;
Ukusetha ipharamitha yomsebenzisi nomlawuli ngokwehlukile, isikhathi sokulibaziseka se-compressor esishintshashintshayo, ukulinganisa izinga lokushisa, i-alamu lapho kunephutha, i-Compressor isebenza njengenqubo ehleliwe lapho iphutha lenzwa;
Imodeli yenhloso yonke enokusebenza okuphezulu uma kuqhathaniswa nenani lentengo;
Ifanele ifriji nokubanda okujulile, umshini wezinhlanzi zasolwandle, i-heater yamanzi nemikhiqizo edinga ukuqapha okushisa okulula ne-alamu.
Kwenziwe ngentando 220v esiqandisini thermostat STC-1000
Shintsha izindlela phakathi kokupholisa nokushisa;
Lawula izinga lokushisa ngokubeka inani lokusetha lokushisa nenani lomehluko;
Ukuvikelwa kokulawulwa kokubanda kokubambezeleka kokuvikelwa;
I-alamu lapho izinga lokushisa lidlula umkhawulo wokushisa noma lapho iphutha lenzwa.
ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo, isilawuli sokushisa se-incubator, i-thermometer yedijithali, isilawuli se-digital thermostat, isilawuli sokushisa se-thermostat, i-aquarium thermometer yedijithali,